पहिलो फिल्मबाटै घमण्डी सुनिलको भविष्य के होला ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
पहिलो फिल्मबाटै घमण्डी सुनिलको भविष्य के होला ?
फिल्मी फण्डा । एउटा राम्रो कलाकार बन्नको लागि क्षमता मात्र भएर पुग्दैन सामान्यत धैर्यता, अनुशासन र बानी व्यहोरा पनि राम्रो हुनुपर्छ । तर हालै फिल्म चि मुसी चिमा पहिलो पटक देखिन लागेका एक कलाकार आफु पहिलेदेखीको स्टार जस्तै कड्एिर बोल्दै पत्रकारहरुलाई आश्चर्यमा पारे । फिल्म चि मुसी चि को एक गीत सार्वजनिक समारोहमा उनलाई फिल्मी फण्डाले गीतको वारेमा सोध्दा उनी उत्तर दिन भन्दा बढि अनावश्यक र घमण्डि कुरा गर्न तम्सिए ।
सार्वजनिक गीतको कोरियोग्राफि समेत गरेका उनले मिडियाकर्मीको प्रश्नमा उत्तर नदिई तपाईको प्रश्न राम्रो छ । उत्तर पनि त्यहि छ भन्दै बोल्न थाले । गीत थाईल्याण्डमा खिचीएपनि अर्थ देखिएन, त्यस्तो खासै केही देखिएन गीतमा किन यस्तो भयो भने प्रश्नमा उनले प्रश्न राम्रो छ उत्तर पनि त्यहि छ मात्रै भने । आफुलाई सोधेको प्रश्नको उत्तर दिन नसकेका उनले निर्देशक दिनेश श्रेष्ठलाई महानायक राजेश हमालको वारेमा सोधिएको प्रश्नमा अनावश्यक बोल्न खोजे । उनले महानायक हमाललाई जीबाट सम्बोधन गर्दै उनको वारेमा बोलेका हुन् ।
आफु र आफ्नो वारेमा बोल्न नसक्ने एउटा नव कलाकारले अरुको वारेमा अनावश्यक बोल्नुले सुनिल क्षेत्री कति घमण्डी छ भने प्रष्ट्याउँथ्यो । विचरा यीनको भविष्य फिल्म क्षेत्रमा के होला ? कठैवरा । यति मात्र हैन पहिलो फिल्मबाट परिचित भएका नव नायक सुनिल क्षेत्री र नव नायिका अलिशा शर्मा एउटै फिल्मबाट हाल प्रेम सम्बन्धमा रहेको समेत फिल्मका स्रोत बताउँछ । आफुले भनेजस्तै राम्रो कलाकार हुन मन भए पहिले बोल्न सिक्ने की सुनिल जी ?